चन्द्रयान–२ सम्बन्धी नासाले जारी गरेको तस्बिरले जनाउने तथ्य – Dcnepal
चन्द्रयान–२ सम्बन्धी नासाले जारी गरेको तस्बिरले जनाउने तथ्य
प्रकाशित : २०७६ असोज ११ गते १२:११
नासाले जारी गरेको चन्द्रमाको सतहको नयाँ तस्बिर
बीबीसी । अमेरिकी अन्तरिक्ष सम्बन्धी निकाय नासाले जारी गरेको चन्द्रमाको सतहको तस्बिरबाट भारतको चन्द्रयान–२ को ल्यान्डर विक्रम निश्चित गरिएको स्थानमा नरहेको पुष्टि भएको छ।
यो कम प्रकाशमा खिचिएको तस्बिर हो। आगामी महिना नासाले फेरि तस्बिर खिच्नेछ। तर भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था आइएसआरओले चन्द्रयान २ लाई असफल भन्न नसकिने बताएको छ। आइएसआरओका अध्यक्ष डा. के सिवनले भने झैँ आइएसआरओले लक्ष्य ९८ प्रतिशत सफल रहेको दोहोर्‍याइएको छ।
अहिलेसम्म ल्याण्डर विक्रम कहाँ छ भन्ने पत्तो छैन तर पनि आइएसआरओले मिशन ९८ प्रतिशत सफल भन्ने दाबी गर्नुले के जनाउँछ? बीबीसी हिन्दीलाई एक वैज्ञानिकले आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा भने– वैज्ञानिक मिशनको सफलता तपाईँलाई के हासिल भयो भन्नेमा नापिन्छ।
आइएसआरओका वैज्ञानिकले भने, ‘हामीले प्रक्षेपण सटिक गरेका थियौँ। अर्बिटरले हामीले अनुमान लगाएकै अनुसार काम गर्‍यो – र त्यो नै यसको सफलताको मुख्य भाग हो। र चन्द्रमामा अवतरण गर्नुपर्ने ल्यान्डरले पनि तीन चरण सफलतापूर्वक पार गर्‍यो तर अन्तिम चरणमा उसले हामीले चाहेको जस्तो काम गरेन।’
‘हामी अर्बिटरबाट जे डाटा पाउने वाला छौं त्यो खासमा दुई तीन मिशनबाट मात्र हासिल हुन सक्छ। अर्बिटरको जीवन एकदेखि सात वर्षको हुन्छ किनकि उसको इन्धन अहिलेसम्म खर्च भएको छैन। यो मामिलामा हामी सौभाग्यशाली छौँ। ’
तर चन्द्रमामा अवतरण गर्नु २.१ किलोमिटर पहिले नै ल्यान्डरसँग सम्पर्क विच्छेद भयो। नासाले भनेको छ( ल्यान्डर खासमा कहाँ अवतरण गर्‍यो भन्नेबारे अझ पनि पत्ता लाग्न बाँकी छ। ‘फेरि अक्टोबर महिनामा उपयुक्त प्रकाश भएका बेला थुप्रै तस्बिरहरू खिचिनेछ।’
आइएसआरओका पूर्व अध्यक्ष डा. माधवन नायरले बीबीसीसँग भने ‘ल्यान्डरको उचाइ ठीक राख्न नसक्दा अन्तिम अवतरण सफल हुन सकेन। यो तीब्र गतीमा झर्‍यो। त्यो मिशनको सानो अंश हो जुन सफल हुन सकेन। अवतरण गर्नु अघि ल्यान्डरको गति करिब जीरो पुर्‍याउनुपर्थ्यो।’
अर्बिटर, ल्यान्डर र रोवर गरि यो मिशनका तीन भाग छन्। यदि अर्बिटरका आठ अंशबाट सात सात वर्षसम्म तथ्याङ्क प्राप्त भइरह्यो भने त्यसले प्रविधि काम गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।